. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: February 2009
သူမ သန်းဝေလိုက်တယ် .. နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၁၂နာရီ ၅၀မိနစ် .. ၁နာရီတောင်ထိုးတော့မှာပဲ .. မနက် အလုပ်သွားဖို့လည်းရှိသေးတယ် .. အင်း .. သူမ အိပ်မှထင်တယ် ..
ဒီစာတမ်းကလည်း ဒီနေ့ညပြီးမှ မနက်ကို အေးအေးဆေးဆေးတစ်ခေါက်ပြန်စစ်ပြီး တင်နိုင်မှာ .. ပြီးခါနီးပေမယ့် အဆုံးသတ်ကို သိပ်မကြိုက်ဖြစ်နေတယ် .. ထားပါတော့လေ .. မနက်မှပဲ အဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ် ..
ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ စာအုပ်တွေပိတ် မီးတွေပိတ်ပြီး အိပ်ဖို့ ပြင်လိုက်တယ် .. သြော် .. အိပ်ရာထဲရောက်ခါမှ စာကြည့်စားပွဲရှေ့က ပြူတင်းပေါက် ပိတ်ဖို့ မေ့ခဲ့ပြန်ပြီ .. သူမ ထပိတ်လိုက်တယ် ..
အိပ်ချင်စိတ်ရှိပေမယ့် အာရုံက စာတမ်းကိုရောက်နေတော့ တော်ရုံအိပ်မရ .. အဆုံးသတ်ဖို့ ကြိုစဉ်းစားနေမိတယ် ..
အိပ်ပျော်လုလု အချိန်ရောက်တော့ ..
ကျွီ .. တံခါးပွင့်သွားသံကြားလိုက်သလိုပဲ .. သူမ မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်ချင်တယ် .. အားယူပြီး မျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ် .. ဖွင့်လို့မရဘူး .. မျက်ခွံတွေက အရမ်းလေးလံနေတယ် ..
ရှပ်.. ရှပ်.. ခြေသံကြားတယ် .. "ဘယ်သူလဲ.." သူမအော်ဟစ်ပြီး မေးလိုက်ပေမယ့် အသံက လည်ချောင်းမှာတင် ပျောက်သွားတယ် .. ပါးစပ်က အသံထွက်မလာဘူး ..
ခြေသံက တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာတယ် ..
ဘာလဲ .. ဘယ်သူလဲ .. ထွက်သွား .. ထွက်သွား ..
သူမ အော်ဟစ်နေတယ် .. ဒါပေမယ့် သူမတစ်ကိုယ်လုံး လှုပ်လို့မရဘူး ..
ကြိုးစားပြီး မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ် .. တစ်ခါ .. မရဘူး .. နောက်တစ်ခါ ..
သူမ မျက်လုံးပွင့်သွားတော့ သူမရှေ့မှာ .. ပိန်ပိန် ရှည်ရှည် ဆံပင်ဖားလားနဲ့ အမျိုးသမီး သဏ္ဍာန်ကို တွေ့လိုက်တယ် ..
ဘယ်သူလဲ .. ဘယ်သူလဲ .. မေးနေတယ်လေ .. ထွက်သွား .. ထွက်သွား
သူမ အသံကုန် အာခေါင်ဖြစ်ပြီး အော်နေမိတယ် .. တကယ်တော့ အသံထွက်မလာဘူး ..
ပုံရိပ်က ရှေ့တဖြည်းဖြည်းတိုးလာတယ် ..
မလာနဲ့ မလာနဲ့ ..
ထွီ .. တံတွေးနဲ့လည်း လှမ်းထွေးလိုက်သေးတယ် .. မရဘူး .. ပုံရိပ်က နီးသထက်နီးလာတယ် .. လက်နှစ်ဘက်ကို ဆန့်တန်းပြီး သူမ ရင်ဘတ်ကို လာဖိတယ် .. သူမထလို့မရဘူး .. ရုန်းလို့မရဘူး ..
ကယ်ကြပါ .. ကယ်ကြပါ .. သူမ အသက်ရှုပ်ကြပ်လာတယ် .. ရုန်းလို့မရဘူး .. အသက်ရှုလို့မရတော့ဘူး .. သူမ သေတော့မှာလား .. ဘုရား ဘုရား .. သူမ သတိရလိုက်တယ် .. မြတ်စွာဘုရား ဂုဏ်တော်တွေကို နှလုံးသွင်းလိုက်တယ် .. သူမ သေမယ်ဆိုရင်တောင် ကြောက်လန့်တကြား မသေချင်ဘူး .. အရဟံ .. အရဟံ .. သူမစိတ်ထဲက တိုးတိုးရွတ်ဆိုလိုက်တယ် ..
ဖိထားတဲ့လက်တွေက လျော့သွားသလို .. အသက်ရှုလို့ ရလာတယ် .. အသက်ကို ရသလောက် သူမ ရှုသွင်းလိုက်တယ် .. အရဟံ အရဟံ .. မြတ်စွာဘုရား ဂုဏ်တော်ကို သူမ မပြတ် ရွတ်ဆိုနေလိုက်တယ် .. သူမ ရှေ့က ပုံရိပ်က မတတ်နိုင်တော့တဲ့အလား လက်တွေကို ရုတ်ပြီး မလှုပ်မရှား ရပ်ကြည့်နေတယ် .. ဆံပင်ရှည်တွေနဲ့ ကွယ်နေတဲ့ မျက်နှာက တဖြည်းဖြည်း မော့လာတယ် ..
အသက်ရှုသံတွေမှား .. ချွေးစေးတွေပျံပြီး သူမ နိုးထလာတယ် ..
သြော် .. အိပ်မက် မက်နေတာပဲ .. သူမ အသက်ကို ၀အောင်ရှုပြီး သက်ပြင်းမောကို မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ် .. စားပွဲပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ရေဗူးကို လှမ်းဆွဲပြီး အမောတကော သောက်ချလိုက်တယ် .. နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ၁နာရီခွဲ .. သူမအိပ်ပျော်တာ နာရီဝက်ပဲရှိသေးတာပဲ ..
မနက်အပြင်ထွက်ဖို့ရှိသေးတော့ သူမအိပ်မှဖြစ်မယ် .. ပြန်အိပ်ပျော်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်တယ် .. မျက်စိထဲမှာ အိပ်မက်ထဲက ဘာမှမပါတဲ့ မျက်နှာကိုပဲ မြင်ယောင်နေမိတယ် ..
အို .. အိပ်မက်ပါ .. လျှောက်မတွေးနဲ့ .. အရဟံ အရဟံ .. သူမ ဂုဏ်တော်ကိုရွတ်ရင်း အိပ်ပျော်အောင် ကြိုးစားလိုက်တယ် ..
လေတိုက်ခတ်သံကြောင့် ပြူတင်းပေါက်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဆွဲလည်းလေးက အသံမြည်သံကိုကြားလိုက်တယ် .. ဟင် .. သူမ တံခါးကို သေချာပိတ်ခဲ့တာပဲ ..
သူမ မျက်လုံးဖွင့်ပြီး ပြူတင်းပေါက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ သေချာပိတ်ထားခဲ့တဲ့ ပြုတင်းတံခါးပေါက်က ပွင့်လို့ ...
pS. အစ်မတစ်ယောက် အိပ်မက်ကို ပုံဖော်ပါသည်။
ရေးသားသူ moekhar at 2/28/2009 10:10:00 AM6comments:
နီးမလိုနဲ့ ဝေးဝေးသွားတယ် ..
ရေးသားသူ moekhar at 2/28/2009 09:01:00 AM No comments:
ရေးသားသူ moekhar at 2/27/2009 09:26:00 AM 1 comment:
ပုခုံးချင်း အတိုက်မှာ ခံစားရတယ်
လက်ဝါးနှစ်ခု ဆုတ်ကိုင်စဉ် ခံစားရတယ်
နှုတ်က စကားတို့မှ သိခဲ့ရတယ်
ခု အလွမ်းတွေ ရင်ထဲပြည့်နေတယ်
ငါ .. သိပ်လွမ်းတယ် ..
ရေးသားသူ moekhar at 2/26/2009 02:34:00 PM3comments:
ကောင်းလေးအိမ် တက်သွားလို့ .. (တက်သွားခြင်းကိုမဆိုလိုပါ ..:P) ဒီနေ့ မနက် ကိုယ့်ရဲ့ သံယောဇဉ်ရှိလှတဲ့ ဘလော့ကလေးကို ဖွင့်လိုက်တော့ ကောင်လေးအိမ်က တက်သွားတယ်ဆိုလို့ ခြေမချိုး .. (မှားလို့ ..) တက်စာ (ဒညင်းသီးတို့ ဘာတို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ..) တက်စာကို ပြန်ရေးမယ် ချိန်နေတာ အလုပ်တွေ ပိနေတာတဲ့ နောက်နေ့ကို ကူးသွားပါတယ် ..
ကောင်လေးအိမ်က ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးတဲ့လေ .. အဲဒါ မိုးခါးလည်းသိတယ် .. မတည်မြဲခြင်း အနိစ္စဆိုတဲ့ အရာကိုလေ .. ဘယ်မှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိသွားလည်းဆိုတော့ ..
မိုးခါး ရန်ကုန်မြို့ကို ခြေဦးလှည့်ချိန်ကပေါ့ .. ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့်ရပ်ဌာနေကိုရောက်ပြီဆိုတော့ စိတ်တွေမှာလည်း ပေါ့ပါးလွတ်လပ်ပြီး ကြည်လင်ရွှင်ပြနေတာပေါ့ ..
လေယာဉ်ကွင်းကနေ လမ်းတစ်လျှောက် ရှုခင်းတွေကလည်း သက်ဝင်လှပနေလေရဲ့ .. စိတ်ပျော်ရွှင်နေချိန်ဆိုတော့ အရာရာဟာလည်း လှပနေတာပေါ့ ..
တစ်နေရာရောက်တော့ မိတ္တူဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ စိတ်ထဲမှာ သူငယ်ချင်းဆီက ငှားလာတဲ့စာအုပ်ကို မိတ္တူဆွဲပြီး ပြန်ပေးရမယ့် ကိစ္စ ခေါင်းထဲရောက်လာပါတော့တယ် .. သူငယ်ချင်းအိမ်ကလည်း ခုဖြတ်သွားတဲ့လမ်းမှာဆိုတော့ ခုမြင်တဲ့ မိတ္တူဆိုင်မှာ ၀င်ပြီး ကူးလိုက် .. လမ်းကျ တစ်ခါတည်း ၀င်ပေးလိုက်ရင် ကိစ္စတစ်ခု ပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ သကာလ ချက်ချင်းပဲ အဖေကို ကားခဏရပ်ခိုင်းရတာပေါ့ ..
ပြီး ကူးမယ့် စာအုပ်လေးကိုယူ မိတ္တူဆိုင်ထဲဝင်ပြီး .. "မိတ္တူဆွဲချင်လို့ပါ .." ဆိုတော့ ဆိုင်ထဲက ကောင်မလေးကလည်း ဖော်ဖော်ရွေရွေပဲ "ဟုတ်ကဲ့အမ .. ရပါတယ်တဲ့ .."
မိတ္တူဆွဲမယ်ဆိုပြီး စာအုပ်ကို စက်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ .. ဆိုင်က ကောင်မလေးရဲ့ "ဟယ် .. မီးပျက်သွားပြီ" ဆိုတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရတယ် .. ပြီးတော့ သူကပဲ .. "အမ ခဏစောင့်မလား .. ခုက မီးလာရမယ့်အချိန် .. ခဏပျက်ပြီး ပြန်လာချင်လာမှာ" လို့ ဆိုလာတယ် .. ကျမကလည်း အမှန်ပြောရရင်မစောင့်ချင်ဘူးပေါ့ .. ခုမှပြန်လာတာဆိုတော့ အိမ်ပြန်ချင်တာပေါ့ .. ဒါနဲ့ "ကြာမလားမသိဘူးနော်ပေါ့ .. အမလည်း အချိန်သိပ်မရလို့ .. မစောင့်တော့ပါဘူး"လို့ ပြောလိုက်တယ် ..
ဒါနဲ့ သူလည်း ကျမကို စာအုပ်ပေးပြီး မီးသွားအချ .. "ဟယ် .. အမ မီးပြန်လာပြီ .." ဆိုပြီး ပြောလာပြန်ရော .. ဒါနဲ့ ကျမကလည်း .. "ဒါဆိုလည်း ဆွဲသွားလိုက်မယ်လေ .." ဆိုပြီး ပြန်ပေးလိုက်တယ် ..
သူလည်း မိတ္တူကို ဆွဲတော့တာပေါ့ .. ဆွဲရင်း တစ်ဝက်လောက်ကျပြန်တော့ မီးက ဖတ်ဆို ပျက်သွားပြန်ရော ..
ဟူး .. ကျမလည်း စိတ်တော်တော် ညစ်မိပါတယ် .. မီးကတော့ အရင်ကတည်းက ဒီလိုပဲဆိုတာ သိနေပေမယ့်လည်း စိတ်တော့ တိုမိတာပေါ့နော် .. ဒါနဲ့ တရားနဲ့ ဖြေလိုက်ပါတယ် .. စိတ်မတိုနဲ့ .. စိတ်တိုရင် ဒယ်အိုးဆိုပြီး စိတ်က မှတ်လိုက်တယ် .. ပြီးတော့ တဆက်တည်း အနိစ္စ အမြဲ မရှိပါဘူးလေ ဆိုပြီး တရားသဘောနဲ့ ရှုလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ .. :P
ဒီလိုနဲ့ .. ထုံးစံအတိုင်း ခဏအကြာ မီးပြန်လာရော .. ဒါနဲ့ သူလည်း ဆက်ဆွဲတာပေါ့ ..
ဒီတစ်ခါကျတော့ရော .. ဆွဲနေရင်း စက်က ထွက်တဲ့စာရွက်က မဲသဲပြီးထွက်လာပါရော .. ဒီတော့ ကောင်မလေးက စက်တွေကို ဖွင့် .. အထဲက အရာတွေကို ဆွဲထုတ် .. ဟိုသုတ်ဒီသုတ်နဲ့ .. ကလိနေပြန်ရော .. လက်တွေမှာလဲ မဲသဲနေပြီ .. ကျမလည်း စောင့်ရတာ တော်တော် ကြာနေပြီ .. လူကလည်း အာရုံနောက်နေပြီ .. ဒါနဲ့ ပါးစပ်က တိုးတိုး ငြီးမိတယ် .. "သြော် .. င့ါနှယ် .. ဒုက္ခ ဒုက္ခ" လို့ ..
ဒါနဲ့ သူ ကလိနေတာ တော်တော် ကြာတယ် .. မပြီးနိုင်ဘူး .. သူ့မလဲ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ တစ်ယောက်တည်း .. ကျမမှာလည်း သနားလည်း သနား .. စိတ်လည်းညစ်ပေါ့ ..
နောက်ဆုံး သူလည်း မတတ်နိုင်တော့တဲ့ အဆုံးမှာတော့ ..
"အမရယ် .. ဘာဖြစ်သွားတယ်မသိဘူး .. လုပ်လို့လည်းမရဘူး .. ညီမ စက်ပြင်ဆရာကို ခေါ်လိုက်ဦးမယ် .. အမလည်းစောင့်ရတာ ကြာနေပြီ .. အားလည်းနာပါတယ် .. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး" ဆိုလာပါတယ် ..
ဒါနဲ့ ကျမကလည်း ..
"ကဲပါ ညီမရယ် .. အမကို အားမနာပါနဲ့ .. ဒါဆိုလည်း အမမစောင့်တော့ဘူးနော် .. ခုပြီးတာလေးပဲ ရှင်းသွားလိုက်တော့မယ် .. ဘယ်လောက်ကျလဲပဲ တွက်လိုက်ပါတော့" လို့ပြောလိုက်တယ် ..
ဒါနဲ့ သူလည်း ကျသလောက်တွက်ပေးပြီး ကောင်မလေး ပြောလိုက်တာက
"အမရယ် .. ခု ဒီမှာနေရတာ .. မြန်မြန် မဂ်ရနိုင်တယ်တဲ့ .. မီးကလည်း အနိစ္စ အမြဲမရှိဘူးတဲ့ .. မီးမလာတော့ လူတွေလည်း ဒုက္ခ ရောက်ရပြန်ရောတဲ့ .. မီး က ပျက်လိုက် လာလိုက်နဲ့ ဖြစ်နေတော့ ရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဆိုလည်း အနတ္တ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်တွေဖြစ်ကုန်ရော" တဲ့လေ ..
သြော် သူပြောမှ စဉ်းစားမိတယ် .. ရန်ကုန်က မဂ်လမ်းနဲ့ တော်တော်နီးပါလားပေါ့ .. ယူတတ်ရင် ကုသိုလ်တဲ့ .. ပေးတုန်း ယူလိုက်ကြရအောင် ..
PS. ကြံဖန်ကျေးဇူးတင်ရသေးတယ် .. :P
တစ်ဆက်တည်း သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ ဆက်တက်လိုက်ပါတယ် ..
တို့ကို ဆက်တက်ပါတယ်နော် :D
ရေးသားသူ moekhar at 2/24/2009 05:19:00 PM4comments:
အချိန်တန်တော့လည်း ခွဲခွာချိန်ကို ကြုံတွေ့ရတာပဲ ..
တွေ့ဆုံချိန်တွေကို တန်ဖိုးထားရအောင် ..
ခပ်ပြုံးပြုံး လမ်းခွဲကြမယ်လေ ..
ရေးသားသူ moekhar at 2/19/2009 04:53:00 PM 8 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 2/18/2009 05:11:00 PM3comments:
ရန်ကုန်ပြန်ဖို့ ခွင့်ရတုန်းက ပြန်ရမယ့် ရက်တွေကို လက်ချိုးရေတွက်ရင်း ရင်ခုန် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ် .. ခုတော့လည်း ၂၄ရက်တာကာလကို ကျော်လွန်လို့ တော်ရာနေရာကို ပြန်လာရပြန်ပြီလေ ..
ရန်ကုန်ကို ပြန်ဖို့ရက်တွေ နီးလာလေလေ စိတ်ထဲမှာလည်း အတွေးတွေ စိတ်ကူးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ် ..
လှေကားက ဆင်းဆင်းချင်း ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဖေကြီးနဲ့ မေကြီး မျက်နှာကို မြင်လိုက်ရတယ် .. ကျမရင်ထဲမှာလည်း အပျော်တွေအပြည့်ပေါ့ .. လေယာဉ်ကွင်းက အိမ်ကိုပြန်ပြီး အိမ်မှာ ချက်ထားတဲ့ ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေတောင် မစားနိုင်ဘူး .. အပျော်လွန်ပြီးတော့လေ ..
သူများနိုင်ငံတွေ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ဘယ်လောက်ခေတ်မှီမှီ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်ပြီး မိဘရင်ငွေ့လှုံရတဲ့အရသာနဲ့ ဘယ်ဟာမှ မယှဉ်နိုင်ဘူးနော် ..
ရန်ကုန်ရောက်ပြီး နောက်တစ်ပတ် စနေနေ့မှာပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးတက်ခဲ့တယ် .. ပျော်လိုက်တာ .. တောင်ကိုးလုံးပတ်တဲ့နေ့ကတော့ လူတွေလည်း လူရုပ်မပေါက်ဘူး .. ဒါပေမယ့် မပင်ပန်းဘူး .. သွားနေနိုင်တာပဲ .. ကျိုက်ထီးရိုး ၂ညအိပ် ၃ရက်ခရီးကလည်း အကုန်မြန်လိုက်တာ ..
ကြားရက်တွေမှာတော့ အိမ်မှာနေလိုက် သူငယ်ချင်းတွေဆီ လျှောက်လည်လိုက် မှာလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ လိုက်ရှာလိုက်နဲ့ အချိန်တွေကုန်ခဲ့တယ် .. စားချင်တာတွေ စားတာလည်း ပါတာပေါ့ .. စိတ်ရှိလက်ရှိတော့ မစားလိုက်ရဘူး .. စားမယ်အားတင်းထားသမျှ ဟိုရောက်တော့ အပျော်တွေလွန်ပြီး မစားနိုင် မသောက်နိုင်ဖြစ်နေတာလေ .. နဲနဲတောင် ပိန်သွားတယ် .. :P
နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ မောင်လေးရှိတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ကို ဖေကြီးနဲ့ မေကြီးနဲ့ အတူ သွားခဲ့တယ် .. ၁ညပဲ အိပ်ပြီး မောင်လေးနဲ့ တွေ့ပြီးတာနဲ့ ပြန်ခဲ့တယ် ..
ပြည်ထောင်စုနေ့မှာတော့ လူကြီးတွေလည်းရုံးပိတ်လို့ ညနေဖက် အကင်တွေလုပ်စားကြတယ် ..
ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ ၃ပတ်အတွင်း သောကြာ နှစ်ရက် ဘုရားတက်ဖြစ်တယ် .. ပြန်ဖို့မတိုင်ခင်တစ်ရက်မှာ စွယ်တော်မြတ်စေတီသွားဖူးခဲ့တယ် .. နေ့လည်မှာ အိမ်မှာ အသုပ်စုံ သုတ်စားကြတယ် ..
16ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့မှာတော့ မပြန်ချင်ပြန်ချင်နဲ့ လေယာဉ်ကွင်းဆင်းပြီး ပြန်ခဲ့ရတယ် ..
အချိန်တွေရယ် အကုန်မြန်လိုက်တာ .. ကုန်သွားပေမယ့် ကျန်ခဲ့တဲ့ ပျော်စရာအချိန်တွေကိုပဲ လွမ်းနေရတော့မှာပေါ့ .. မပြန်ရခင်ကတော့ အချိန်တွေအများကြီးလိုနဲ့ ခုတော့လည်း ကုန်ဆုံးသွားပြန်ပြီ .. ပြန်ဖို့ရက်ကို လက်ချိုးရေတွက်နေခဲ့ပေမယ့် ခုတော့ ဒီရက်တွေအားလုံးဟာ အတိတ်ဖြစ်သွားပြန်ပြီ ..
ရေးသားသူ moekhar at 2/17/2009 11:53:00 AM2comments:
အားလုံးပဲ ပြန်ရောက်ပါပြီလို့ ..
ရန်ကုန်မှာ ရှိတုန်း အွန်လိုင်းသိပ်မတက်ဖြစ်ဘူး .. ဘလော့ကို ၀င်ဖို့ ဆို ဝေလာဝေးပဲ .. ကျော်ရ ခွရနဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကလည်း ကျတယ်လေ .. ဒီတော့ ဘလော့ နဲ့ လည်း ဝေးကွာနေတာကြာပေါ့ .. ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ မမေ့ မလျှော့ လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
ရေးသားသူ moekhar at 2/17/2009 08:05:00 AM5comments: